November 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 12:54 PM | No မှတ်ချက် |
By Ko Nyo Win
ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့လို့ပြန် ရှယ်လိုက်ပါသည်။ အစဆုံးဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ ရေးထားတာ အနှစ်သာရ ရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးမှ မဟုတ်ပါဘူး ယောင်္ကျားလေးလည်း ဖတ်သင့်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 12:46 PM | No မှတ်ချက် |
shared မြန်မာ စာအုပ်များ's photo.
ဒေါင်းလို့ရပါပြီဗျို့ ဒီစာအုပ်ရဲ့အလှူရှင်ကတော့ ကိုအောင်တေဇာ (MDY) မှဖြစ်ပါတယ် ။ သတ္တ၀ါတို့၏သံသရာ - သော်တာဆွေ http://www.mediafire.com/?zz7n9gklj7yqely
Tin Min Latt · 908 followers
ကျွန်တော် မကျေနပ်တာ တစ်ခုရှိတယ်ဗျာ.. ရုပ်ရှင် ဗွီဒီယို လောကကြီးကိုပေါ့..
သူတို့တွေပြောလိုက်ရင် စကားလုံး အကြီးကြီးတွေ သုံးနေကြပြီး စစ်အစိုးရ လက်ထက်က ဆင်ဆာတွေ ပိတ်ထားလို့ အနုပညာ ဖန်တီးခွင့် မရခဲ့ပါဘူး ပြောကြတယ်..
တကယ် ဘာဆော့ဖ်ဝဲမှ မလိုပါဘူး။ Youtube က ဗီဒီယိုတွေကို အလွယ်တကူ Download ယူလို့ရပါတယ်။ ယူပုံယူနည်းကတော့ -
၁။ မိမိ Download ယူချင်တဲ့ Youtube ဗီဒီယိုကို ဖွင့်ပါ။
၂။ https နေရာတွင် s ကိုဖြုတ်ပေးပါ။
၃။ www.youtube.com နေရာတွင် www.ssyoutube.com ဖြစ်ရန် ss ကို Youtube အနောက်တွင် ထည့်ပေးပါတယ်။
မကြာသေးမီက ဂျာမဏီနိုင်ငံရှိ တီဗွီ အသံလွှင့်ငှာန တခုတွင် “၁၀စက္ကန့် လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်” ဟုသော ပြိုင်ပွဲ တစ်ရပ်ကို ဆုကြေးငွေ ကြီးကြီးပေးပြီး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲကို သတင်းဆရာများ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြပြီး လူအများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံရသော အစီအစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များထဲတွင် “လဲချ”ဟု အမည်ရှိသော ရိုက်ချက်က အကောင်းဆုံး ပထမဆုကို ရခဲ့သည်။
မျက်မမြင်တယောက် စားသောက်ဆိုင် အတွင်းသို. ၀င်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ. စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင် က ကိုယ်တိုင်ထပြီး ဟင်း menu ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ မျက်မမြင်က ‘ကျွန်တော် က မျက်စိမမြင်တဲ. အတွက် ကြည်.လို.မရပါဘူး ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှေ.ကလူတွေစားသွားတဲ. မဆေးရသေးတဲ. ဇွန်း သာပေးပါ။ ကျွန်တော် အနံ.ရူပြီး ဘာစားမယ်ဆိုတာ မှာပါရစေ’ ။
အရှင်ဝိမလဝံသ နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်'s photo.
နီးစပ်ရာက သူတွေ အကူအညီပေးစေလုိုပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက ဗမာမိန်းကလေးတွေ အနုိုင်ကျင့် အစော်ကားခံနေရပါတယ်။ ငွေကြေးနှင့်အရောင်းစားခံနေရပါတယ်။ ငွေဝယ်ကျွန်ဘဝကုိုရောက်နေကြတယ်။ လူတကာသုံးတဲ့ သောက်ရေအုိုးလုိုဖြစ်နေတယ်။ ဟုိုဘာသာဝင်ကစော်ကား၊ ဒီဘာသာဝင်ကစော်ကားနဲ့ အဖတ်ဆယ်မရအောင် ဖြစ်နေပါပြီ။
Pretty Chaw Su shared Myanmar Online News's photo.
ဒီနေ့က သူမတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ပါ။ သူမကတော့ ခင်ပွန်းသည် ဖြစ်သူ သောမတ်စ် အိမ်ပြန်အလာကို စောင့်နေပါတယ်။ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကို အတူဆင်နွှဲဖို့ အတွက်ပေါ့။ လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အရာရာဟာ ပြောင်းလဲလို့လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေအတွက်နဲ့ နှစ်ယောက်သား ခဏခဏ စကားများကြပါတယ်။
Author: lubo601 | 6:07 PM | No မှတ်ချက် |
တစ်ခါတုန်းက ပညာရှိ အဖိုးအိုတစ်ဦးနဲ့ သူ့တပည့်တွေဟာ ခရီးတစ်ခုကို အတူထွက်လာခဲ့ကြတယ် ။ လမ်းခရီးတစ်ခုမှာ တောနက်ထဲရောက်တဲ့အခါ သူတို့အားလုံး ခဏနားကြတယ် ။
သောက်စရာရေလည်းကုန်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မလှမ်းမကမ်း မှာ ရှိတဲ့အိုင်ထဲကနေ ရေသွားခပ်ဖို့ အဖိုးအိုက စေညွှန်လိုက်တယ် ။ ဒီတော့ တပည့်တွေလည်း ရေကန်ရှိရာကိုသွားကြတယ် ။
ဂျပန် ဟင်းလျာ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက အများစုနှင့် မရင်းနှီးတာမို့။ ဂျပန်ဟင်းလျာထဲတွင် ထည့်သုံးမည့် ပါဝင်ပစ္စည်း တစ်ခုခြင်းစီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ၊ မည်သည့်နေရာတွင် ၀ယ်ယူနိုင်သည် အချက်အလက်တွေပါ ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..
Author: lubo601 | 6:06 PM | No မှတ်ချက် |
ခေတ်ကြီး အခါကြီး သမယကြီဲး
1. come = လာသည် ၊ ရောက်လာသည်။
2. come across = တွေ့ဆုံသည်။
3. come along = မြန်မြန်လုပ်သည်၊ လိုက်လာသည်။
4. come back = ပြန်လာသည်။
5. come down = ဆင်းလာသည် ၊တန်ဖိုးကျသည်။
6. come for = လာယူသည်။
7. come from = မှလာသည် ၊ ဇာတိဖြစ်သည်။
တပ်ထဲမှာ နေတုန်း ပြောခံရတာ။ ပြောတာက တစ်ခြားသူမဟုတ်။ ညီမအရင်းကိုယ်တိုင်။ ပြောလည်း ပြောစရာ။ တစ်လတစ်လ မှိုင်နေရတဲ့အချိန်ကများ သကိုး။ မျက်နှာမကောင်းတော့ဘူးဆို ညီမကသိပြီ။ အစ်ကို ဘိုင်ပြတ်နေပြီမဟုတ်လား။ ယူထားဦးမလား မေးလာရင် မယူချင်သလို၊ ယူချင်သလို လက်က ကမ်းထားပြီးသား။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးပြကြီးမှာတော့ တာဝန်ထမ်းရပါတယ်။ မနက်ည လိုင်းကားခတင် ၈၀၀ ကျပ်၊ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီက တစ်ကြောင်း ၅၀၀၊ ညနေစောင်းရင် ကားကြုံလေးမျှော်လို့။ လူကြီးများကလည်း စာနာ နားလယ်ပေးပါတယ်။ အကုန်အကျ သက်သာအောင် တပ်ပြင်မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားပေးတယ်။ လူပျိုတုန်းက ပြသနာမရှိပေမယ့် ဇနီးနဲ့ သမီးမျက်နှာမြင်လာတော့ ညနေစောင်းဆို ရွပိုးထိုးနေပြီ။
ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တစ်စုက အသက်(၄)နှစ်က (၈)နှစ်အရွယ်ထိ ကလေးတွေကို
"အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ?"ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို မေးခဲ့ကြတယ်။
လူတွေထင်မှတ်မထားလောက်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ကျယ်ပြန့်လေးနက်တဲ့အဖြေကို
တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သင့်ရော.. အချစ်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားသလဲ?
Author: lubo601 | 10:04 AM | No မှတ်ချက် |
ဝတ္တုကို ဖတ်ဖို့ အခက်အခဲရှိနေသူတွေအတွက် ရုပ်ရှင်ကားတကားရှိတယ်။ လက်တင်မင်းသမီး ဆယ်မာဟိုက် ပါဝင်ထားတဲ့ ကားလေးပါ။ ရုပ်ရှင်ဆိုတော့လည်း ဝတ္ထုကို မမှီဘူးပေါ့။
အဓိက ပြောချင်တဲ့ စကားတွေ ပျောက်ကုန်တယ်။ ခုလည်း ဖေ့ဘွတ်မှာ ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းတခုလုံးကို ချုပ်ပြီး စကားလုံးတွေကို အကျဉ်းချုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းကို စလိုက်ကြရအောင်။
Author: lubo601 | 9:59 AM | No မှတ်ချက် |
လေယာဉ်နဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါ မိမိနိုင်ငံမှာဘဲ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကို တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ လက်မှတ် ၀ယ်ရ ပါမယ်။ အဲဒီအပိုင်းကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ပြောနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ထည့် မရေးတော့ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နိုင်ငံဘက်ကို ရောက်လာပြီးချိန်မှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ပြောင်းဖို့ လိုအပ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောဖို့ဆိုဖို့ လိုလာနိုင်ပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံမှာလည်း မိမိဘာသာစကားကိုပြောတတ်တဲ့လူတွေ ရှိဖို့ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုလိုမယ်မယ် လေယာဉ်နဲ့ခရီး သွားတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အထွေထွေ အကြောင်းအရာတွေကို အခု ဖော်ပြသွားပါမယ်။
အရင်ဦးဆုံးလုပ်ရမှာကတော့ Kali ကို http://www.kali.org/downloads/ မှာ ဒေါင်းရမှာပေါ့
2 GB လောက်ပါပဲ ဟီး... စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဒေါင်းပေါ့မဟုတ်ရင်လဲ အခွေဝယ်လိုက်ပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ အခွေဝယ်တာ အခွေဆိုင်တွေကောင်းချက်ကတော့ အဲဒါဘာလဲမေးခံလိုက်ရတာ ရင်ကိုနာလို့ဘယ်အခွေဆိုင်မှကို မ၀ယ်တော့ဘူးဗျာ။
(၁) တစ်နေ့ အရာအာလုံးကို စွန့်ခွာသွားရမှာ..တစ်နေ့ အားလုံးအားလုံးကို ထားသွားရအုံးမှာ.. ဆိုတာ ခဏခဏ တွေးပေးပါ။
(၂) ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် မပိုင်တာ..ငါပိုင်တာ တကယ်တမ်းတော့ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါလားလို့ ခဏခဏ ဆင်ခြင်နေပေးပါ။
(၃) ငါ သေရအုံးမှာ..အချိန်မရွေး ငါသေသွားနိုင်တယ်လို့လည်း ခဏခဏ ရွတ်ရွတ်ပေးပါ။
(၄) ငါဘာတွေတွေးနေလဲ?ဘာတွေခံစားနေလဲ ?
ခုစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေလဲ.. ဆိုတာမျိုး ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်အမြဲတမ်း သတိရတိုင်းရတိုင်း ပြန်ပြန်ကြည့်နေပေးပါ။ ပြန်ပြန်သိနေပေးပါ။
Right Click & Select ပိတ်ထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေကို ဒီလို ဖွင့်မယ်
Author: lubo601 | 9:55 AM | No မှတ်ချက် |
http://saithu102.blogspot.com/search/label/%E1%80%BB%E1%80%95%E1%82%86%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%BC%E1%80%B1%E1%80%91%E1%80%BC မှ ....
Ko Thein Lwin ညောင်လေးပင်နယ်သူနယ်သားများ ဆုံစည်းရာ
၃။ ခမည်းတော်(ဖခင် )-သုဒ္ဓေါဒနမင်း။
By May Zaw
ခန္ခာကိုယ်ပေါ် လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ မီးတစ်စဟာ
Mobile phone ကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးပြုပြင်နည်းများ...
မေး။ ဖုန်းကအရမ်းလေးနေလို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ?
ဖြေ။ မည်သည့်ဖုန်းအမျိုးစားတွင်မဆို (Model နိမ့်သည်ဖြစ်စေ၊ မြင့်သည်ဖြစ်စေ)
မိမိတို့၏ဖုန်းအရမ်းလေးနေပြီဆိုပါက ဖုန်း၏အနောက်မှ Battery အဖုံးကိုဖွင့်ပါ။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြသကြရာမှာ အမျိုးသားတွေဟာ စကားနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အပြုအမူနဲ့ ပြတတ်ကြပြီး အမျိုးသမီးတွေကနှုတ်ကနေ ဖွင့်ဟပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ အမျိုးသားအများစု ပြုလုပ်တတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Author: lubo601 | 6:39 PM | 1 Comment |
ကျွန်တော် ဒီစာရေးလို. ဒီဇာတ်လေးရေးလို. မိန်းမတွေဘက် မျက်နှာလိုက်တယ်လို.ထင်ချင်ထင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်နားထဲမှာ ပြန်ပြန်ကြွားနေတဲ့အသံတွေ ကြားနေရလို.ပါဗျာ။ အားလုံး ဖြူစင်သန်.ရှင်း အပြစ်ကင်းစွာ ချစ်နိုင်ကြပါစေဗျားးးးးးးးးးးးးးးး။
Author: lubo601 | 10:51 AM | No မှတ်ချက် |
ဆရာပေါက်စလေး ၂ ယောက် က ကျောင်း သား ကျောင်း သူ များ အား စာမေး ပွဲ စစ်နေသည်..
ဆရာပေါက်စလေး၂ ယောက် က ခွက် ပုံး ကစ် ရင်းအ၇က်သောက်ရင်း စစ် နေ ကြခြင်းဖြစ် သည်...
စစ် တဲ့ ပုံ စံ က တော့... ကြွတ်ကြွတ် အိပ်လေး တခု စီထဲ မှာ. လူ့ ကိုယ် တွင်း မှာ ရှိတဲ့.. အင်္ဂါ အစိတ် အပိုင်း တ ခု စီထည့် ထား သည်...
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ တာဝန်ယူလာခဲ့သည်မှာ သုံးနှစ်နီးပါးရှိလာခဲ့ပါပြီ။ အချိန်ကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ အစိုးရအဖွဲ့အပေါ် ဝေဖန်မှုများမှာလည်း ခပ်စိပ်စိပ်ကြားလာရသည်။ အထူးသဖြင့် သမ္မတ၏ရည်မှန်း ချက်များ အောင်မြင်ရန် အဓိကအကောင်အထည်ဖော်ပေးနေသော သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းနှင့် ဦးစိုးသိန်းတို့အပေါ် ဝေဖန်မှုများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများ မကြာခဏ ဆိုသလို မီဒီယာများတွင် တွေ့လာရသည်။
Soe Min November 28, 2013 at 9:07am
သမီးလေး သူငယ်တန်းတက်ကတည်းက သူ့အဖေဟာ လွယ်အိပ်တစ်လုံးနဲ့ ရွာစဉ်လည်နေရတဲ့အတွက် ဧည့်သွားဧည့်လာ၊ ဘာလိုချင်လဲ၊ ဘယ်သွားချင်လဲလောက်သာ အနိုင်နိုင် အလိုလိုက်နေရတာမို့ သမီးကို သူ့အသက်သူ့အရွယ်အလျောက် သိသင့်သိထိုက်တဲ့ မြန်မာမှု မြန်မာ့ဓလေ့တွေနဲ့ ယဉ်ပါးအောင် သွန်သင်ရတာ တော်တော်တော့ ခက်ခဲပါတယ်။ သူကျင်လည်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲဒီမြန်မာစရိုက်ကလေးတွေက တဖြေးဖြေး ပျောက်ကုန်တာကိုး။ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် တန်ဆောင်တိုင် ပွဲဈေးတန်းကြီးခေါ်သွားတာတောင်မှ သူစားတတ်တဲ့ မုန့်ပဲသွားရည်စာ တစ်ခုတလေ ရှာမရဘူး။ ကစားစရာ တစုံတရာ လိုချင်စရာ မရှိဘူး။ သူ့ကို မုန့်ကျွေးချင်ရင် Chewy Junior တို့၊ B & B Bakery တို့လိုဆိုင်မျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံးတော့ ပီဇာ၊ ဆူရှီ၊ ဒင်းဆမ်း၊ဘာဂါရတဲ့ဆိုင်မှပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မြန်မာအဖေအမေကမွေးပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သမီးလေးဟာ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်လို မြန်မာအစားအသောက်တွေနဲ့ စိမ်းနေမှန်းမသိပါဘူး။
ဒေါ်စုသြစတျေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့တွင် ယနေ့ပြောသွားသောမိန့်ခွန်းတွင် အခြေခံဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိကကျသောအချက်ကို ထောက်ပြပြောဆိုသွားခဲ့သည်။ ဒီမိုကရေစီကျသောအခြေခံဥပဒေတခု၏ အဓိကစံနှုံးမှာ လိုအပ်လာလျှင် ပြည်သူလူထုအများစုဆန္ဒဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများ၏အခြေခံဥပဒေများ သည်လည်းလိုအပ်သလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြတာဖြစ်သည်။
Author: lubo601 | 10:21 AM | No မှတ်ချက် |
စိတ်ကူးယဉ်တဲ့အရွယ်က အိမ်မက်ထဲက လက်တွဲဖော်က
စံနှုန်းတွေမျိုးစုံ သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါလိမ့်မယ် ....
Framework for Economic and Social Reforms (Burmese & English Version) by Thet Aung Lynn
Author: lubo601 | 10:20 AM | No မှတ်ချက် |
November 26, 2013 at 10:03am
နိုင်ငံရေးအရ ပြင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရင် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးက အလွန်လွယ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပထမ ငါးနှစ်သက်တမ်း၏ သုံးပုံနှစ်ပုံသို့ ရောက်ချိန်တွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အရှိန်တင်ကြိုးပမ်းလာခြင်းနှင့်အတူ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ဦးတည်လှုပ် ရှားမှုများလည်း ပေါ်ပေါက်လာသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်တို့နှင့် အခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်လို သည်ဟု ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာပြည်မှ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို ကွန်ပျုတာမှ ကြည့်ရှုနည်း
တွေးတောခြင်း မပြုပဲ အင်္ဂလိပ်စကားကို အလိုအလျှောက်ပြောခြင်း စကားလုံးများသည် မိမိ၏ ပါးစပ်အတွင်းမှ အလိုအလျှောက်လွယ်ကူစွာထွက်လာခြင်းတို့သည် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ် စကားပြောလေ့လာသူတိုင်း၏ ပန်းတိုင်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ အဖြေမှာ . You understand instantly. ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရန် ကျွန်တော်တို့၏ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာခြင်းနည်းလမ်းကို ပြောင်းရန် လိုအပ်ပေသည်။ ပထမဆုံး လုပ်ရမည့် အချက်မှာ English words တွေကို လေ့လာခြင်း အလုပ်ကို ရပ်တန့်ဖို့ပါပဲ။ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ အချက်ပါပဲ။ words တွေကို မမှတ်သားသင့်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ပညာရေး စနစ်ကို စတင်ပြောရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်တို့ ပညာရေးစနစ်ဟာ factory English learning system ပါပဲ။ text book ထဲမှ vocabulary များအားကျက်ခြင်း meaning ကျက်ခြင်းတို့ကို ကျွန်တော် တို့ နှစ်ပေါင်း တော်တော်ကြာကြာ လုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီး။ သို့သော်…ကျွန်တော်တို့သည် ဒီလောက် များပြား လှသော words တွေကို တကယ့်အပြင် လက်တွေ့ဘ၀တွင် အသုံးမပြုနိုင်ပေ။
Author: lubo601 | 10:05 AM | No မှတ်ချက် |